An American dentist who killed a prized, Zimbabwean lion called Cecil will not be charged as he had obtained the legal authority to slay the animal.
Cecil the lion’s killer, dentist Walter Palmer, returns to work
Sept. 8, 201502:53
Oct. 12, 2015, 4:22 PM UTC / Updated Oct. 12, 2015, 4:23 PM UTC
Dentist Walter Palmer arrives back to his office following a lunch break on September 8.Jim Mone / AP
"We approached the police and then the Prosecutor General, and it turned out that Palmer came to Zimbabwe because all the papers were in order," she said, according to the news agency.
Muchinguri Kashiri said Palmer was free to visit Zimbabwe as a tourist, but not as a hunter, Reuters said, implying he would not be issued the permits a hunter needs.
Zimbabwean officials had previously suggested they would seek Palmer's extradition over the killing.
Zimbabwean professional hunter Theo Bronkhorst is charged with breaching hunting rules during the hunt, in which Cecil was reportedly lured out of the Hwange National Park using bait. He and a game park owner, who has been charged with allowing the hunt, deny the charges.